Inta badan hawlaha falanqaynta sawirada ee looga baahan yahay Erdas Imagine ama barnaamijka ENVI ayaa iminka ku jira online thanks to EOS Platform (EOS Platform). Adeeggan cusub ee casriga cusub ayaa bilaabay by EOS Data Analytics si GIS xirfadleyaal ah xal buuxa oo loogu talagalay raadinta, falanqeynta, kaydinta iyo muuqaalka weyn ee ...
Marka la eego natiijooyinka sahankan oo dhawaan ay sameeyeen Guddiga shaqaalaha xirfadeed ee Geomatics (EGDP) ee RICS, Brian Coutts raad horumar ah ee erayga "Geomatics" oo ku dooday in ay tahay waqti si ay u eegaan a isbedel Ereygan ayaa ku soo laabtay si uu u muujiyo madaxa "fool xun". ...
"The riixaya ee badhan awood u leh in la furo aragti kale," ayuu qoray wargayska u dhow dhammaadka ee uu article, Muthukumar Kumar, gaar ahaan lagu tilmaamayo Abuuridda bay'ad 3D, ay faaiidada, muhiimadda ay leedahay iyo kuwa mustaqbalka. Ogsoonow in ay ka hadlaan mustaqbalka, si aan ka quackery fudud iska dhaqaaqo, waxaa loo baahan yahay in eraygan ...
Tiknoolijiyada casriga ah Uuraysatay sida technology ee loo isticmaalo si ay u bartaan, u maamulaan, u falanqeeyaan, arki iyo faafiyaan labada xogta iyo macluumaadka ku saabsan meesha uu shay oo dhan, ayaa qoroto ay fikrad hore ee triad kooban muhiimad of GIS, GPS iyo Remote Ogaanshuhu (Rs Ingiriisi) kaas oo lagu darayo tiknoolajiyada soo baxaya ee isticmaala qayb ...
Waa xiiso leh sida xogta maalin kasta ee adeega dadweynaha, ilaa xad geospatial in qaar ka mid ah nidaamo hore oo khaas ah, sida yaqanaan saadaasha cimilada, hadda iyadoo la kaashanayo naqshadeynta dhaceen oo cad waxay u baahan yihiin in ka badan idaaciga xirfad leh. Inkasta oo aanu hubno in xirfadlayaasha mawduuca ku barokacay, ay ...
Ka dib markii reading article ah in uu bilaabo adoo waydiinaya waxa loo shaqeeyayaasha runtii raadiyo GIS, waan la yaabay in heerkee natiijooyinkan la extrapolated karaan dalalka our guriga kuwaas oo xaqiiqada laga yaabaa in la mid ah ama ka duwan (laga yaabee in aad u kala duwan) idinkaa in. Qalabka 'raw' ee loo isticmaalo daraasadda ayaa dhammaantood bixiyay ...
Mawduuca laga hadlayo maanta waa Web GIS. Si aan 'loo aqoonin', waxaa si fudud loogu turjumi karaa 'Websaytka GIS', laakiin maxay tani dhab ahaantii ka dhigan tahay? Maxay tahay xajmiga? Maxay 'u leedahay fursado badan oo codsi' sida lagu sheegay cinwaanka boostadan? Waxaa jira shan sababood oo uu Eric van Rees ku dhexjiray ...
saynisyahano Data, injineero iyo EOS horumarinta software GIS, shirkad ku salaysan ee California, ayaa dhawaan bilaabay qalab goynta-qarkiisa ku salaysan daruurtii u ogolaanaya dadka isticmaala, suxufiyiinta, cilmi-baarayaasha iyo ardayda doondoono oo falanqeeyaan xaddi weyn ee xogta updated on fiirinta dhulka. LandViewer waa adeeg shaqo ...
QGIS, PostGIS, LADM - in Course ee Management Land horumariyo by IGAC
Wada dadaallo kala duwan, hadafka iyo caqabadaha in Colombia si ay u ilaaliyaan hogaaminta ee koorta Southern ee arrimaha geospatial, inta u dhaxaysa 27 July iyo August 4 ah, Xarunta Cilmi Baarista iyo Horumarinta ee Geographic Information - CIAF Geographic Institute Agustín Codazzi horumarinta Course ah: Codsiga heerka ISO 19152 ...
Tani waa dukumiintiyo kobcin ah oo lagu heli karo luqada Isbaanishka, oo leh waxyaabo aad u qiimo badan, taariikh ahaan iyo farsamo ahaanba la xidhiidha maareynta sawirada farsamooyinka la xidhiidha cilmiga dhulka iyo nidaamyada macluumaadka juqraafiyeed. Maaddooyinka intooda badani waxay leeyihiin bogo badan oo ku saabsan bogga halkaa ka kooban yahay. ...
Qalabka Caddeynta iyo Qalabka Caddeynta ee Codka Waddanka ah waa sheyga sannadaha waayo-aragnimada leh ee qaybta macaamiisha. Laga soo bilaabo macmiilkii ugu horreeyay ee soo saaro kartoonka juqraafi ee Bogotá, Colombia, waxay kordhiyeen macaamiishooda dhammaan dhulka adduunka, ka qaybqaatay mashaariic kala duwan iyo warshado. Codsiyada qalabkoodu waa mid ballaadhan sida aan ku qiyaasi karno, iyada oo tixgelin ...
Nidaamka Qaran ee Maamulka Hantida (SINAP) waa madal technology in midaynaysa dhamaan macluumaadka la xiriira khayraadka jirka iyo sharciyeed ee qaranka, halkaas oo dadweynaha kala duwan, jilayaasha gaarka loo leeyahay iyo shakhsiyaad u qoraan oo dhan xawaalad la xiriira alaabta a hantida, lagama maarmaanka u ah dastuurka iyo dib u nooleynta suuq ...
fulinta LADM isticmaalaya INTERLIS - Colombia
Toddobaadkii saddexaad ee bisha Juun, 2016 waxay barteen koorsada INTERLIS, oo loo arko luuqad iyo qalab si loo fududeeyo hirgelinta Maareynta Maamulka Maareynta Dhulka (LADM) ee degaanka maamulka Colombia. Koorsada waxaa loo dejiyay labo heer, mid ah heer asaasi ah / aragti ah oo leh koox weyn
Maamulkii Dunida, hadda, mid ka mid ah caqabadaha waaweyn ee dalalka. Ma aha rabitaan cusub, sababtoo ah shaqadoodu waxay ka badan tahay shuruudaha ugu muhiimsan ee dastuurka iyo shuruucda kala duwan ee xukuma xiriirka dadka degaanka ee leh kheyraadka dadweynaha iyo khaaska ah ee qaranka. Aan ...
Waxay ahaayeen muddo shan iyo toban maalmood ah tusaalayaal muuqaal ah sida SIG ee Ameerika ee Latin America ay ku xiran tahay, iyada oo loo eegayo wadashaqeyntu oo hadda u oggolaato teknoolojiyada macluumaadka iyo isgaarsiinta. Tani waa mashruuc dhiiri galiya Machadka Lincoln, maalmo badan oo qiiq iyo kaafi ah oo saaxiibo ah Diego Erba, Mario Piumetto iyo Sergio ...
Kuwa soo socda ayaa tusaale u ah hawlaha lagu fulin karo iyadoo la adeegsanayo Microstation BentleyMap si ay u maamulaan macluumaadka laga helo xogta OracleSpatial. Ku rakib Macmiilka Oracle Ma'aha lagama maarmaan in lagu haysto Oracle kombiyuutarka. Kaliya macmiilka, kiiskan waxaan isticmaalayaa 11g R2. Si ka duwan marka la isticmaalayo Microsation Geographics, ...
Boggii hore Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 ... Page 19 page Next